ISITYHILELO 17 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
ISITYHILELO 17ISITYHILEL ... 17
171Esinye sezithunywa ezisixhenxe ezaziphethe izitya ezisixhenxe seza kum, sathi: “Yiza, ndiza kukubonisa ukugwetywa kwehenyukazi elimi phezu kwemilambo.Jer 51:13 2Kaloku izikumkani zehlabathi zirheletya nalo. Ewe, ihlabathi liphela lithe thwanga kukurheletya nalo.Isaya 23:17; Jer 51:7”
3Ke kaloku ndaba semandleni kaMoya, saza isithunywa eso sandisa entlango. Apho ke ndabona umfazi ekhwele phezu kwerhamncwa elibomvu elalinemibhalo emanyumnyezi. Lalineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi.SiTyh 13:1 4Umfazi lowo wayevathe ezimfusa nezibomvu, eyokozela ngamaso egolide, intsimbi, namatye exabiso. Ngesandla wayephethe indebe yegolideJer 51:7 eyayizele uluchwe lokungcola nokurheletya kwakhe. 5Ebunzi kwakubhalwe igama elingaziwa mntu: “UBhabheli, unina wamahenyukazi, nazo zonke iintlondi zehlabathi.” 6Lo mfazi ndambonayo wayenxile ligazi losapho lukaThixo, ngokunjalo negazi labo babengqina ngoYesu.
Ndithe ndakumbona ndamangaliswa, kodwa isithunywa eso sabuza sathi: 7“Ngani ukuba umangaliswe? Phulaphula ke ndikuxelele ihlebo ngalo mfazi kunye nerhamncwa akhwele kulo elineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi. 8Elo rhamncwa ulibonileyo lelo lalikho, lingasekhoyo ngoku; kambe ke lisaza kuphuma enzonzobileni,Dan 7:7; siTyh 11:7 landule ke ukuya kwantshabalalo. Abo bamagama angazange abhalwe encwadini yabaphilayo,Ndum 69:28 seloko lasekwayo ihlabathi, baya kumangaliswa bakulibona irhamncwa; kuba kaloku lalikhe ladla ubomi, kodwa ngoku alisekho, phofu lisaza kubuya livele.
9“Kwabo banako ukutolika nasi isitshixo. Iintloko ezisixhenxe ziinduli ezisixhenxe emi kuzo umfazi. Kwangokunjalo zimele ookumkani abasixhenxe. 10Isihlanu kubo asisekho, omnye usesezintanjeni, omnye useza, kambe naxa selefikile uya kulawula ixeshana nje. 11Ke lona irhamncwa, elo lalikhe lakho lingasekhoyo ngoku, lingowesibhozo – nakuba lingomnye wabasixhenxe nje – futhi liza kutshabalala.
12“Zona iimpondo ezilishumi ozibonileyo, ngookumkani abalishumiDan 7:24 abangekaqali ukulawula. Kambe ke baya kwabelana ngolawulo kunye nerhamncwa okwethutyana nje. 13Kaloku boshumi injongo yabo iyafana: kukunikezela ulawulo kwirhamncwa. 14Baya kulwa neXhwane, kodwa liboyise. Kaloku lona liyiNkosi yamakhosi, iKumkani yeekumkani. Abalandeli balo baya kuba nenxaxheba kolo loyiso lwalo. Ewe, nditsho abanyulwa ababiziweyo nabathembekileyo.”
15Isithunywa saqhuba sathi: “Amanzi emilambo lawo uwabonileyo, apho limi khona ihenyukazi, luluntu, iintlanga, izizwe, neelwimi ngeelwimi. 16Iimpondo ezilishumi ozibonileyo kunye nerhamncwa zosuka zilithiye ihenyukazi. Ziya kulihluba libe ze, zilishiye lingumpha ochutyiweyo; ewe, ziya kulitya inyama, zijike zilitshise libe luthuthu. 17Kaloku uThixo ukunikele kuzo ukufezekiswa kwecebo lakhe. Ziya kuvana, amagunya azo ziwanike irhamncwa, ade afezekiswe amazwi kaThixo.
18“Umfazi lowo umbonileyo sisixekokazi esilawula bonke ookumkani behlabathi.”